Nanamarika Ny Fanoherana Ny Fankahalana Vehivavy Tany Pakistana Ny Diabe Aurat (Diaben’ny Vehivavy) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2018 2:53 GMT
Ny fangatahan'ny mpandray anjara Diabe Aurat (Diaben'ny Vehivavy). Sary avy amin'ny pejy Twitter ofisialin'ny Diabe Aurat 2018.
Nanokatra ny “fanandratana ny firahavaviana” manohitra ny fankahalana ny vehivavy ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy 8 Martsa tao Pakistana. Nidina an-dalambe tany amin'ireo tanàndehiben'i Karachi, Lahore ary Islamabad ireo vehivavy sy lehilahy nitaky ny rariny ara-toekarena, ara-pananahana ary ara-tontolo iainana ho an'ny vehivavy .
Nokasaina hatao tao Karachi ilay hetsika tany am-boalohany. Na izany aza, nipoitra tao Lahore sy Islamabad ihany koa ny diaben'ny firaisankina izay nampiseho ny fiombonana miray hina manohitra ny fanavakavahana sy ny fankahalana ny vehivavy.
Nikarakara diabe teo ambanin'ny sehatra iray antsoina hoe “Hum Auratien” (midika hoe “Izahay Vehivavy” amin'ny teny Urdu) ireo fikambanana feminista Pakistaney toy ny Antokon'ny Mpiasa Awami , Ny Fiombonan'ny Feminista, ny Fikambanam-behivavy ary ny Zazavavin'i Dhabas .
Voalaza fa ny 70 isanjaton'ny vehivavy ao Pakistana no iharan'ny herisetra ara-nofo sy ara-batana avy amin'ireo sakaizany, raha ny ny 93 isanjatony kosa no iharan'ny herisetra ara-nofo sy ara-batana eny amin'ny toerana natokana ho an'ny daholobe.
Noho ny fitomboan'ny trangan-kerisetra mianjady amin'ny vehivavy dia mino ireo mpikarakara ny diabe fa izany no fiandohan'ny fampisehoana ny fitroaran'ny vehivavy.
Nilaza i Sadia Khatri, iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Zazavavin'i Dhabas raha niresaka tamin'ny The Express Tribune hoe:
Efa maro ny hatezerana ary nivoaka ihany izany ny farany ary fomba iray hitondrana izany fahatezerana izany ho any amin'ny toerana misy ny zavatra matanjaka sy mahafinaritra ity diabe ity .
Nisy olona marobe hita tamin'ny diabe rehetra.
Nisioka ny lahatsary iray avy amin'ny diabe tao Karachi ilay mpisolovava sady mpikatroka Jibran Nasir:
Olona marobe tao amin'ny Diabe Aurat
Women and their male allies must fight this fight together 🤜🏽🤛🏽#WomensDay#AuratMarch#AuratMarch2018#InternationalWomensDaypic.twitter.com/bYwTWTA581
Tokony hiady ity tolona ity miaraka ny vehivavy sy ireo lehilahy mpiara-dia aminy
Tsy nihira teny filamatra momba ny fitoviana fotsiny ny vehivavy, fa sady nandihy sy nihira ny fankalazana ny maha-vehivavy. Hoy ny Diabe Aurat 2018 hoe:
Niantso ho an'ny zon'ireo sarimbavy sy sarindahy ihany koa izy ireo miaraka amin'ny sora-baventy mivaky hoe: “Ny lehilahy niova ho vehivavy dia vehivavy. Mangìna!”
Nisioka ity sary ity ilay mpikatroka sady bilaogera Hija Kamran:
Trans women are women. Shut up!!!! #IWD2018#AURATMARCH ##KARACHI❤❤❤❤pic.twitter.com/7i7mXTwe1e
Vehivavy ny lahy niova ho vavy. Mangina!!!
Nanome voninahitra ireo vehivavy feminista Pakistaney fanta-daza nitolona tamin'ny herisetra mifototra amin'ny fanavakavahana ny vehivavy ireo mpandray anjara tamin'ny diabe, anisan'izany i Asma Jahangir sy Sabeen Mahmud. Maty noho ny fijanonan'ny fony tampoka i Jahangir tamin'ny 11 Febroary 2018 raha novonoina tamin'ny 24 aprily 2015 kosa i Mahmud.
Nisioka ilay Manampahefana Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Patari Music Ahmer Naqvi raha nahatsiaro an'i Mahmud hoe:
Tsy vitako ny tsy hanamarika rehefa mijery ireo vehivavy rehetra mikarakara ny Diabe Aurat aho fa fantatro tamin'ny alalan'i Sabeen ny ankamaroan'izy ireo. Manana adidy lehibe ho azy nandrisika sy nampianatra ny ankamaroantsika ny taranatsika. Mahatsiaro anao izahay androany.
Nanatevin-daharana ny diabe ireo vehivavy avy amin'ny lafim-piainana rehetra, na izany vehivavy miasa, na vehivavy mikarakara tokantrano, na vehivavy manao asa-tanana. Nikendry ireo izay nihevitra ny diabe ho toy ny hetsika nofinofin'ny sangany ilay mpisera iray antsoina hoe Faizan:
Offf sary mahafinaritra avy amin'ny diabe aurat, mampiseho ny fandraisana anjara avy amin'ny saranga rehetra. Hitan'ireo olona manoloana eto tsara izay maneso izany ho hetsika ho an'ny sangany fotsiny .
Amin'ny ankapobeny, ny Diabe Aurat (Diaben'ny Vehivavy) 2018 no fiandohan'ny tolona ho amin'ny fitoviana ao amin'ny fiarahamonina sy ny antso ataon'ny vahoaka mba hijoro hanohitra ny fankahalana vehivavy.